32 Bits နှင့် 64 Bits ကွာခြားချက်များ ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Windows နှင့်ပါတ်သတ်သမျှ » 32 Bits နှင့် 64 Bits ကွာခြားချက်များ
By နေမင်းမောင်11:26 PM40 comments
မေးထားတဲ့ အကိုတစ်ယောက်လည်း ရှိတာနဲ့ မသိသေးတဲ့ သူတွေလည်း တကယ်သိသင့်တဲ့ အရာလေးတွေ မိုလို့ ကျွန်တော့်အကို ကိုသန့်ဇင်ဌေး ရေးပေးထားတဲ့ ပို့စ်လေးကို သူလည်း ဒီရက်ပိုင်း စာမေးပွဲကြောင့် မအားတာရော ကျွန်တော်လည်း ဒီနောက်ပိုင်း ဆိုဒ်ဖက်မလှည်းဖြစ် တာကြောင့် အားလုံးနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး ပြန်ပြီးတော့ ဖြစ်ချင်တာလည်း ပါတာကြောင့် အကို့အစား ကျွန်တော်ပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. နောက်ပိုင်းတော့ အခြေအနေကြောင့် စာတွေရေးပေးနိုင်တော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး .. ဒါပေမယ့် သိသင့်သိထိုက်တဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေ ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပိုစ့်တွေကို ပြန်ရှယ်ပေး သွားပါမယ် .. စာတွေ အများကြီးရေးဖို့တော့ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ပါတယ် .. ကျွန်တော့်ကို ကံဇာတာက အခွင့်အရေးမပေးတော့လည်း ကျွန်တော်လည်း လွန်ဆန်လို့ မရတော့ပါဘူး .... ကျွန်တော် တက်နိုင်သလောက်တော့ အားလုံးကို ထောက်ပံ့ပေးသွား အုံးမှာပါ .. နေမင်းမောင်ဆိုတာ ရှိနေသေးသရွေ့တော့ အားလုံးအတွက် အကူအညီ ရနေစေရအုံးမှာပါ ... မေးခွန်းတွေ မပြန်နိုင်တာတွေ ရှိရင်လည်း စိတ်မဆိုးကြဖို့ တောင်းပန်ချင်ပါတယ် .. ကျွန်တော့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အခြေအနေက တော်တော်ဆိုးရွားနေလို့ပါ ..
. အားလုံးပဲ ပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့ပါစေခင်ဗျာ ... အခုလို ပြန်နေလိုက်ရတာ စိတ်ထဲမှာတော့ တော်တော်ပျော်သွားတယ် .. ပြောချင်တာတွေ ပြောလိုက်တာ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဘာတွေရေးထားမှန်းမသိဘူး ဖြစ်နေအုံးမယ် .. ကဲအောက်မှာ အကိုရေးထားတာလေးကို လေ့လာ လိုက်ပါအုံး ခင်ဗျာ ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ အကြောင်းအရာလေး တခုကို အခြေခံပြီးရေးပေးချင်ပါတယ်. လူတိုင်းတော့ ဒီပြသနာကို တက်နေတာ မဟုတ်ပေ့မယ့် 32 @ 64 bit ကို မခွဲခြားတက်ကြသေးဘူး ဖြစ်နေကြတယ်. 32 နဲ့ 64 ကကွာခြားချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေ့မယ် ခု အရင်ဆုံးပြောပြမှာက မိမိစက်မှာ 32 လား 64 လားဆိုတာကို ကြည့်တက်ဖို့နဲ့ မိမိ စက်ရဲ့ Processor က build in က 64 bit ကိုလက်ခံလားဆိုတာကို တချက်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေကို ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာတွေကို အရင်ပြောပြီးသွားရင်တော့ ကျွန်တော် နောက်ဆုံးဆွေးနွေးပေးမှာကတော့ မိမိစက်မှာ ရမ်းထားတဲ့ 32 ဒါမှမဟုတ် 64 bit OS ကို သုံးနေကြတယ် ဒီနှစ်ခုမှာဘာတွေက အားသာချက်ရှိတယ် ဘယ်လိုတွေကွဲပြားသွားတယ်ဆိုတာကို အနည်းအကျဉ်းပြောပြပါ့မယ်။
အရင်ဆုံး မိမိစက်မှာ 32 လား 64 လားလို့ မေးရင် ဖြေနိုင်ဖို့တွက်ကတော့ နည်းလမ်းမျိုးစုံရှိပါတယ် ..ကျွန်တော်ကတော့ အတက်နိုင်ဆုံး အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းကိုပဲ့ ပြောပါမယ်. ၁ မျိုးတည်းမဟုတ်ပဲ့ ကျွန်တော် နှစ်မျိုးပြောပြပါ့မယ်.
အရင်ဆုံးဘာဆောဝဲမှာ မလိုပဲ့ ကျွန်တော်တို့ MY computer >>Right click>> properties >>System ရှဲ့system Type ကို ကြည့်လိုက်ရင် 64 လား 32 လားဆိုတာကို သိပါပြီ။ ဘာလို့ 32 ဖြစ်နေရတာလည်း 64 ဖြစ်နေရတာလည်းဆိုတာကို နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ ထပ်ရှင်းပြပါ့မယ်။
ဒုတိယ တခု အနေနဲ့
window key >>>Start menu,>>> Programs -> Accessories -> System Tools -> System Information
ဒီအပေါ်က အဆင့်အတိုင်းတဆင့်ခြင်း သွားပြီးတော့ အောက်ကပုံလေးလိုနေရာလေး system type ကို ကြည့်လိုက်ရင် တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အောက်ကပုံလေးတိုင်းကြည့်လိုက်ရင် မြင်ပါလိမ့်ဦးမယ်....
ဒီအပေါ်က နှစ်ခုနဲ့တင် ကိုယ့်စက်က 32 လား 64 လားဆိုတာကို ခွဲခြားတက်လောက်ပြီထင်တယ်။ ဒါဆိုရင် ကိုယ်သုံးမဲ့စက်က 64 ကိုလက်ခံလားဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ ဆက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်... စက်တိုင်းကတော့ 32 bit ကိုလက်ခံပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က 64 ကိုလက်ခံလားပဲ့ တချက်ကြည့်ရပါတော့မယ် .. ကဲ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုကြည့်ကြမလဲ?
ပထမဆုံးအနေနဲ့ Control Panel\_ System and Security\_ System
My computer >> Right click >> Properties >> System >>Rating >> Window Experences Index ကနေ>>View and printed detail … ကိုနိုပ်လိုက်ရင် အဲ့မှာ ဆက်ကြည့်ကြည့်ပါ.. အောက်ကပုံကိုကြည့်လိုက်ပါ...
အနီနဲ့ဝိုင်းပြထားတဲ့နေရာကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ.. 64 bit capable မှာ Yes ဖြစ်နေတာကို သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီစက်က 64 bit OS ကိုလက်ခံ ပါတယ် အသုံးပြုလို့လည်း ရပါလိမ့်မယ်။ဒီလို လက်ခံတိုင်းလည်း 64 bit ကိုသုံးလို့ရပြီလားဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ တချက်ပြန်စဉ်းစားရပါလိမ့်ဦးမယ်။ ဒါကတော့ 64 bit OS ရဲ့ System Requirement ကို တချက်ကြည့်ရပါမယ်။ 64 bit OS က RAM2Gb ရှိမှ အသုံးပြုလို့ ရမှာပါလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါကြောင့်မိမိစက်မှာ Ram2gb ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ အသုံးပြုလို့ ရမှာ ဖြစ်ပြီး မရှိရင်တော့ နောက်ထပ် ထပ်တိုးပေးရပါလိမ့်မယ် မတိုးပေးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ 32 bit ကိုပဲ့ အသုံးပြုနေဖို့ပဲ့ အကြံပြုလိုပါတယ်။...
ဒီတခုကတော့ ဆောဝဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ခွဲခြားနည်းပါ ဒါကတော့ အကြမ်းဖျင်း မဟုတ်တော့ဘူး ဒီဆော့ဝဲနဲ့ဆိုရင် CPU. Graphit .RAM တွေပါ မက caches တွေကိုပါ ကြည့်လို့ ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းမှာတော့ ကိုယ့်စက်မှာ ရမ်းနေတဲ့ OS က အထီးလား အစ်မလား ခွဲခြားတက်အောင်လုပ်တာ အဆင့်မရူပ်ပါဘူး. အောက်က ပုံကိုကြည့်လိုက်ရင် သဘောပေါက်မှာပါ။ဆော့ဝဲနာမည်က CPU_Z ပါ သူက Freeware ဖြစ်သလို System application ပါ... ဒီနေရာမှာ http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ အကုန်လုံးကိုကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ အခုတော့ 64 bit ကို လက်ခံ အသုံးပြုနိုင်လားဆိုတာကို သိချင်တဲ့ အတွက် အောက်မှာ ပုံနဲ့ အနီနဲ့ ၀ိုင်းပြထားပါတယ်။ EM64T ဆိုတာကို တွေပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆို 64 ကို လက်ခံပါတယ်...
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ 64 လား 32 လား ကြည့်တက်ပြီ ကိုယ့်စက်မှာ 32 ရော 64 ကိုရော ကြိုက်တာ ရွေးသုံးနိုင်တဲ့ Processor ရှိလားကြည့်တက်ပြီ... ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ ဆက်သွားရမှာက 32 နဲ့ 64 ရဲ့ကွာခြားချက်တွေပါပဲ့. ဒါကို လူတော်တော်များများ တိတိကျကျ မသိကျသေးပါဘူး။ ကျွန်တော် သိသလောက် ပြောပြပါ့မယ်။
32 bit နှင့် 64 bit ရဲကွာခြားချက်များ....
အပိုင်း ၁ ကို ဆက်လက်ရေးသားပါဦးမယ်......
Windows Vista 64-bit edition is probably the first stable version of 64-bit Windows operation system, despite the fact that XP does have 64-bit version but that wasn’tavery stable one that people can rely on. However, because Vista itself has many own compatibility issues the 64-bit version didn’t really go off the ground.
This has changed in Windows 7. People are eager to give its 64-bitatry if their hardware supports it. And we also highly recommend that you should go that route if your hardware is equipped by the latest technology. Not only does it give youabetter performance gain but it also gives your much big room to grow on your computer.
If you are stillabit of confusing what this 64-bit version really is about, here areafew things that may help youalittle bit to clear it up.
1. What’s the difference between 32-bit and 64-bit?
In short, the 64-bit version of Windows handles much larger amounts of RAM, and more effectively thana32-bit system. You might ask how much larger in 64-bit comparing to 32-bit. Here is an illustrative example that speaks itself quite well.
A 8-bit system is like the size ofabusiness card;
A 16-bit system is like the size ofatable;
A 32-bit system grows to likeawhole world;
But when it comes to 64-bit, it explodes the size to like an universal.
How big exactly ina64-bit system?
However, even though 64-bit provides that much large space, Windows7only supports up to 192GB access on physical memory.
Upgrade to CS5.5 starting at $399! Only at Adobe.com
2. No waste of installed RAM ona64-bit system
If you haven’t noticed, Windows732-bit is capable of only using 3G of RAM. By contrast, Windows 64-bit can not only make use of much larger RAM space, but is capable of using the memory remapping feature ofamodern BIOS, which allows the Operating system to really use the complete 4GB.
Therefore, if you install Windows764-bit ona4GB computer you will not waste 1GB of RAM any more like you would with Windows732-bit.
3. Performance fact ona64-bit system
If you are hoping that your 32-bit of applications will run faster ona64-bit system, you might be disappointed. The truth of fact is that
Only applications that are optimized for 64-bit will run faster than their 32-bit counterparts. Hence, if you have software whose vendor explicitly endorses 64-bit, then you might notice improved speed with Windows764-bit.
4. Compatibility concerns on 64-bit system
This wasabig concern to both XP 64-bit and Vista 64-bit but is gettingalot better on Windows 7. Both software and hardware vendors understands now the future belongs to 64-bit, and have madeahuge effort on getting more and more software and hardware compatible with the latest architecture.
Microsoft, as the platform supplier, also has made huge improvement on Windows,7in particular. They also built an online Windows7Compatibility Center for people to check and find out whether the program or device is compatible with the 64-bit version of Windows 7. As hardware and software vendors continue to update this information, so check back often.
5. How to tell if my computer is 64-bit ready?
There are two tools that you can use to determine if your processor is 64-bit ready. However, you will need to haveawindows installed first in order to run these tools. Otherwise, head over to BIOS to see if you can find any information indicating what type of your processor is running on your computer.
And here is how to tell if your installed Windows7is running on 64-bit or 32-bit, if you already haveawindows7installed.
6. Can I runa32-bit program on 64-bit system, or vice versa?
The short answer is, yes, you can runa32-bit program ona64-bit system but you cannot runa64-bit software ona32-bit Windows.
7. Can I upgradea32-bit Windows7to 64-bit?
Too bad, there is no direct upgrade path that you can do so. You will need to back up your files and choose the Custom option during Windows7installation.
ဗဟုသုတ ရပါတယ်ခင်ဗျာ . . .
lional June 28, 2012 at 4:53 PM
thanks brother maung
Anonymous June 28, 2012 at 10:51 PM
Anonymous June 29, 2012 at 2:11 AM
အင်း....ဖြေရှင်းချက်ကျမှ မြန်မာလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ရေးနေသေး...ခင်ဗျာကော်အကုန်နာလည်လို့လား...သူများရေးထားကိုကူးပြီး..ဟီး ဟီး..အရှက်လည်းရှိဘူး...
Thein Zaw Ygn June 29, 2012 at 10:05 PM
Thein Zaw Ygn
ဟုတ်ကဲ့ ဗဟုသုတအများကြီးရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျို့
အများတကာအတွက် အချိန်တွေ ခွန်အားတွေ အများကြီးစိုက်ထုပ်
Anonymous June 30, 2012 at 5:52 AM
ဟုတ်ကဲ့ ဗဟုသုတအများကြီးရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
I appreciate your hardworking post,Bro!!Thanksamillion!!!!!!!!!!!!!!!!
phone win July 3, 2012 at 11:07 AM
မြန်မာလိုလေး ဆက်ရေးပေးစေချင်တယ်ဗျာ။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း နားမလည်ဘူးဖြစ်နေတာ။ အခုတော့ နားလည်စပြုလာပါပြီဗျာ။
Durip July 4, 2012 at 10:49 AM
ကိုနေမင်းမောင် တို့လို နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ဆိုဒ်တွေ အချိန်အားလျောစွာ post လုပ်ထားပေးဒါ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ဦးတည်ချက်မရှိပဲ သူများကိုအပုတ်ချတာကို ဗွေမယူပေးပါနဲ့။
အကိုတို့ရဲ့ စေတနာကို နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာသူအများကြီး ကြိုဆိုလက်ခံလျှက်ပါ။
ဆက်လက်ပြီး စိတ်သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ ဆက်လုပ်သွားပါလို့ အားပေးချင်ပါတယ်။
Blue Cloud July 6, 2012 at 12:31 AM
for your helpful heart
we praise u Mr Nayminmaung
million of thanks ပါကိုနေမင်းမောင်။
အကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပြောပြပေးတဲ့ အတွက် ပါ နောက်အပိုင်းကို ဆက်လက်ရေးပေးပါဦး ဗျာ................ကျွန်တော် 62 ကိုပျောင်းချင်လို့ ပါ အရင် က သုံးတာ 62 ပါ အခု 32 ဖြစ်သွားတယ် အကို ၀င်ဒိုး အသစ်တင်လိုက်လို့ ပါ အခု 62 ပြောင်းချင်လို့ ပါ ဆက်ရေးပါဦးနော်
နန်းဖောင်းနွန်း July 14, 2012 at 3:17 PM
အကိုရေ ကျွှန်တော့ကိုတခုလောက်ကူညီပါအုံး win7မှာ my computer ,right click , properties နိပ်လိုက်၇င် win7logo လေးရှိတယ် အဲဒီ win7logo လေးကို change တဲ့နည်းလမ်းလေးပြောပြပေးပါ အုံးကိုနေမင်းရေ။ သူများတွေ change ထားတာတော့တွေဖူးတယ် အကိုနေ။ Win Xp အတွက် လည်း အကို ကိုgmail ကနေပြီးမေးထားတာရှိတယ် ဖြစ်နိုင်၇င် ကျွှန်တော့ gmail ထဲ နည်းလေးပို့ပေးပါနော် ကိုနေမင်းမောင် thank alot my bro
realdj02@gmail.com ပါ အကို
mayzin July 15, 2012 at 12:46 PM
aung zaw July 19, 2012 at 9:17 PM
နေမင်းမောင် ဟာ ကျွန်တော့်ထက်ငယ်မယ်ထင်တယ် ဒါပေမယ့် ပညာကြီးတယ်
ဒီလိုblogs တွေရှိနေလို့အဝေးရောက် ကျွန်တော့်လို basic လောက်သာတတ်တဲ့
သူအတွက် A LOT OF THINK ပါပဲ။ သြော် nokia နှင့် မြန်မာဖောင့် က ဖောင့်ပဲ
ဒေါင်းလို့ရတယ် pdf ဒေါင်းမရဘူး ရှင်းပြပါအုံး
myomin July 27, 2012 at 10:04 PM
Anonymous July 27, 2012 at 10:25 PM
ကောင်းပါတယ် ဆက်လုပ်ပါ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကို့လို ပညာရှင်တွေရှိနေတာကတော့် ၀မ်းသာစရာပါ အရာရာသင်
ယူလို့မရနိုင်တော့် ခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့ ပညာဖြန့်ဝေနေတာကိုတော့်လေးစားပါတယ်...
"အပင်မြင့်ရင်လေတိုက်ခံ၇တတ်ပါတယ်" လေတိုက်မခံချင်ရင်တော့် အောက်မှာဘဲ နေတာကောင်းပါတယ် ဆက်လုပ်ပါ အားပေးနေ ဖတ်ရှုနေပါတယ်
i gainedalot of knowledge concerning computer by reading and observing your website. now i know how to use the computer and how to install the soft wares in my computer. so, i can say myself that i am completed. thank you so much and Ko nay min maung ling lives.
handy men August 24, 2012 at 4:10 PM
Thank you for your knowledge share.
အကိုရေ မြန်မာလိုရေးပြီး တင်ပေးပါလား
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အစ်ကို့ ကျန်းမာရေးကို အထူးဂရုစိုက်ပါ ။ အများအကျိုးအတွက် အချိန်တွေကို စွန့်နေတဲ့ အစ်ကို တစ်ယောက် ရှိနေတဲ့ ပြသနာတွေကို အမြန်ဆုံးအောင်မြင်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်ပါစေ။
ko moe September 18, 2012 at 7:21 PM
ကျေးဇူးပါ အကိုနေမင်းမောင်။ ကျမ္မာပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။
Khin Maung Soe March 23, 2013 at 4:27 PM
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် အားတိုင်းလာလည်ပါမယ် သိချင်တာလေးတွေကို သိခွင့်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ထာဝရ ပျော်ရွှင်နိူင်ပါစေ
oungnai zaw April 16, 2013 at 8:47 PM
တကယ့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်ကို
Chit Thu October 1, 2013 at 8:09 AM